राज्यले मिडियामा बार्ताको हल्ला फिजायो तर पार्टीलाई आधिकारिक पत्र पठाएन -विप्लव « Postpati – News For All
राज्यले मिडियामा बार्ताको हल्ला फिजायो तर पार्टीलाई आधिकारिक पत्र पठाएन -विप्लव
बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक राज्यसत्ता घोषणा गरेको नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशैभरि सङ्गठन सुदृढ तथा विस्तार अभियान– २ संचालन गरिरहेको छ् । देश अब द्वन्द्वतिर अघो बढेको कतिपयको बुझाई छ । के साँच्चिकै देश द्वन्द्वतिर अघि बढेको हो त ?
यसै बिषयमा नेकपाको आधिकारिक मुखपत्र रातोखबरले महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ को ताजा अन्तरवार्ता प्रकाशन गरेको छ ।
हेर्नुहोस ताजा अन्तरवार्ता:
गत मङ्सिर ८ गते पार्टीको आयोजनामा भव्य एवम् सानदार जनप्रदर्शन र जनसभा भयो । वर्तमान राज्यले भीषण दमन गर्दागर्दै पनि यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जनताको सहभागिता हुनुको कारण के होला ?
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा पनि यो राज्यले जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, दिनदिनै बदनाम भैराखेको छ । यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्था फेरि विफल भएको अवस्थामा पार्टीले के सोचिरहेको छ ?
देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप र देशीय प्रतिक्रियावादीहरूको साँठगाँठमा अर्को प्रतिगमन हुने सम्भावना देखिएको छ ?
विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूका बीचमा एकताको कुरा चलिरहेको थियो । यसका बारेमा बताइदिनुस् न ?
केपी—प्रचण्डहरूले कम्युनिस्टहरूको बदनाम गरिरहेको स्थितिमा उनीहरूको प्रतिवाद कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?
सरकारले वार्ताको कुरा ग¥यो तर तपाईंहरूले वास्तै गर्नुभएन भन्ने छ नि ?
वार्ता गर्नुभएन भन्दै सरकारले फेरि दमन सुरु गरेको छ । कमरेड प्रकाण्ड, कमरेड जीवन्तलगायत नेतालाई वारेन्ट गरिएको छ भने गिरफ्तारी पनि सुरु गरेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म जनताका पक्षमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा देशभित्र धार्मिक अतिवाद देखापरिराखेको छ । यसका बारेमा पार्टीको धारणा राखिदिनुस् न !
यो धेरै चिन्ताको विषय हो । मध्ययुगको अन्त्यदेखि उन्नाईसौँ शताब्दीसम्म जनताले दुत्कारेको धर्मको विषयलाई नेपालमा आज जनता विभाजित पार्ने र भिडाउने खेलमा प्रयोग गरिँदैछ । धर्म भनेको जनतामाथि शोषण र शासन गर्ने हतियार हो । शासकहरूले आफ्नो अत्याचार, उत्पीडन र दमनलाई सही साबित गर्न, आफूलाई भगवान्को दूत बताएर जनतामाथि अमानवीय लूट मच्चाउन प्रयोग गरेको हतियार हो धर्म । अत्यधिक श्रमिक जनताको भाग्य भत्केको देखाएर आफूलाई भाग्यमानी देखाउन शासकहरूले धर्मलाई प्रयोग गरे । धर्म जुनसुकै होस् सबै एकै हुन् । हिन्दु, क्रिस्चियन, मुस्लिम, बौद्ध सबैको एउटै सार हो– भववान्, प्रभु, अल्लाह देखाएर जनतालाई लुट्ने ।
विडम्बनाको कुरा के भयो भने कम्युनिस्ट भन्ने केपी—प्रचण्डहरूले क्रिस्चियनलाई प्रोत्साहन दिन अर्बौं रुपैयाँमा आफूलाई बेचेका छन् । यहाँ हिन्दुको सट्टा क्रिस्चियन भएर के हुन्छ ? के युरोपलाई मध्ययुगमा पोपको गिर्जाघरले जङ्गली, दानवी शासन गरेको होइन ? पोप र पादरीहरूलाई जनताले लखेटेर राजनीति गर्न नपाउने बनाएर थन्क्याइदिएका होइनन् ? अनि नेपालमा यी आएर के नयाँ हुन्छ ! ब्रह्मा, विष्णु र रामले नपुगेर जनता ठग्न ईशु ल्याइरहेका छैनन् ! यो सब दलाल पुँजीपतिवर्गले आफ्नो राज चलाउन चालिरहेका झेल हुन् । हामीले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ– धर्म, भागवान्, ईश्वर सब नभएका झूट, बकबास र कल्पना हुन् । यी जनताको दिमाग समाप्त पार्ने विष हुन् । यसको भ्रममा पर्नु हुँदैन । हामीले ज्ञान र विज्ञानमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
अरू केही भन्नुहुन्छ कि ?